Waldhabdee Itiyoo-Eertiraa hiikuuf dhimma furamuu qabu
Waldhabdee Itiyoo-Eertiraa hiikuuf dhimma furamuu qabu Featured
Finfinnee: Ministirri Muummee RFDI Doktar Abiyyi Ahmad si’a duraatiif Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf haasaa taasisaniin, waldhabdee Itoophiyaafi Eertiraa waggoota hedduu lakkoofsise mariitiin furuuf kutannoon kan hojjetan ta’uu ibsaniiru. Lammiileen Itoophiyaafi Eertiraa faayidaatiin kan walitti hidhaman qofaa osoo hintaane hariiroo seenaa baroota dheeraa kan qabaniifi dhiigan kan walitti firooman ta’uusaanii dubbatanii, walitti dhufeenya biyyoota lameenii deebisuuf tattaaffii walirraa hincitne kan godhan ta’uus haasaa isaanii keessatti tuqaniiru. Mootummaan Eertiraas ejjennoo walfakkaatu qabachuu akka qabus waamicha dhiyeessanii turan. Dhimma kana ilaalchisee xiinxaltootni siyaasaa ni dubbatu.
Mootummoota Walta’aniitti Doktar Qonxanxaniyoos Barihetayi Gorsaa Qorannoo Imaammata Afrikaati. Akka isaan jedhanitti, sababni guddaan waldhabdee Itoophiyaafi Eertiraa dhimma Baadimmeeti. Kunis, Eertiraan lafti Baadimmee seeraan ala Itoophiyaatiin hanga har’aatti qabamee waan jiruuf biyyattiif deebinaan walitti bu’iinsi biyyoota lameenii waggoota hedduu lakkoofsise kan raawwatuudha jechuun ejjennoo qabatu.
Mootummaan Itoophiyaa garuu Baadimmeen kan Eertiraa akka hintaaneetti ibsuun hawaasni laficharra jiraachaa jiran Itoophiyaanota ta’uusaanii akka ragaatti kaasu. Kunimmoo yoo ilaalamu madda waldhabdee biyyoota lameenii ta’uun walfalmisiisaa kan tureefi jiru dhimma Baadimmee ta’uusaati jechuudha.
Akka ibsa Doktar Qonxanxaniyoositti, waldhabdeen Itoophiyaafi Eertiraa hiikamuu dhabuunsaa hariiroo seenaa ummattoota biyyoota lameenii miidhuurra darbee sochii dinagdees gonkumaa akka dhaabatu godheera. Kunimmoo Itoophiyaan keessumaa sochii daldalaa si’eessuuf buufata doonii Jibuutii, Barbaraa haalaan akka hinfayyadamneef gufuu ta’uusaa ibsu. Kana malees, waggoota baay’eef daangaa biyyattii eeguuf jecha loltootni Itoophiyaa Baadimmee buufatanii jiran hedduu waan ta’aniif, fayyummaasaaniifis ta’e hawaasa naannawichaaf gaarii akka hintaane eeru.
Kanaaf, Itoophiyaan tooftaa nageenyiifi araarri itti bu’u barbaaduu qabdii jedhanii, haasaa Doktar Abiyyiin taasisan ejjennoo gaarii ta’uu dubbatu. Kana gochuuf ammoo mootummaan Itoophiyaa filannoo lama qaba.
Tokkoffaan, Eertiraan waldhabdee jiru karaa nagaatiin akka furamuuf marii’achuu kan hinfeene yoo ta’e, qorannootiin filmaata biraa barbaaduun murteessaadha jedhu. Kana jechuun ammoo filannoowwan gama hawaasummaan, dinagdeefi siyaasaan jiran hojiirra oolchuutiin furmaata waaraa fiduun kan danda’amuudha jedhu.
Lammaffaan ammoo Eertiraan dirqamaan lafa Baadimmee Itoophiyaarraa fudhachuu kan barbaaddu yoo ta’eefi dur mootummaan Itoophiyaas kennuuf waliigaltee taasiseera yoo ta’e fala barbaaduun barbaachisaa ta’uusaa eeru. Kunis, Baadimmeen kan Eertiraatti taanaan ummati laficharra jiraachaa jiru eenyu akka ta’an adda baasuudha. Dhugaan jiru garuu ummati Baadimmee Itoophiyaanota waan ta’aniif, lafti Baadimmees kan keenya ta’uusaa mirkaneessuun rakkisaa mitii jedhu. Kana ammoo Manni Murtii Waliigalaa Addunyaa kaartaa Xaaliyaaniifi Biritaaniyaan hojjetamanirratti hundaa’uun lafichi kan Itoophiyaa ta’uu murteessuusaa ibsu.
Waamichi Doktar Abiyyi taasisan fudhatama kan qabu ta’ullee Mootummaa Eertiraa garuu deebii quubsaa qabatee dhiyaachuusaaf garuu shakkii akka qaban ibsu. Kanaaf, gama kanaan mootummaan Itoophiyaa hanga har’aatti imaammata ifaan ifatti ummataan beekamuu waan hinqabneef, qopheessuun ykn icciitiin yoo jiraate ammoo haaressuun waldhabdee biyyoota lameenii furuun gaariidha, jedhu.
Yunivarsiitii Finfinneetti Doktar Taarraqany Adeeboo Qorataa siyaasaa yoo ta’an, keessumaa yunivarsiitichatti akkaataa walitti bu’iinsi hiikamuu danda’urratti yeroo dheeraaf barsiisaa turaniiru. Akka isaan ibsanitti, biyya kamuu keessatti sirni mootummaa wayita jijjiiramu ykn aangawotni mootummaa si’a geggeeddaraman hariiroo biyyoota ollaas ta’e alaa waliin qaban fooyyessuu barbaadu. Kunimmoo misooma kamiifuu nageenyi bu’uura ta’uusaa kan mul’isuudha.
Haalli wayita ammaa Itoophiyaa keessa jirullee gaarii waan hintaaneef, mootummaan keessaafi alaan hariiroo biyyattii fooyyessuun dirqamasaati jedhanii, dhimma Eertiraarratti haasaan Doktar Abiyyi taasisanis sirrii ta’uusaa dubbatu. Kunimmoo Itoophiyaan waldhabdee biyyoota lameenii hiikuuf mariin furmaata ta’uusaa hoggansa Obbo Isaayyaas Afawarqi hubachiisuudha, jedhu.
Ministirri Muummee duraanii Obbo Haayilamaariyaam Dassaalanyis akkuma Doktar Abiyyi Eertiraa waliin haalduree tokko malee marii taasisuuf yaada dhiyeessanillee milkaa’uu akka hindandeenye yaadatanii, ammas itti fufiinsaan tattaaffii gochuun murteessaadha. Mootummaan Eertiraas waldhabdee jiran mariitiin furuutu qaroomina malee waraanni furmaata ta’uu hindanda’uu jechuun gorsu.
Jaarraa 21fa kana keessa waldhabdeewwan uumaman hundumaa mariitiin qofa hiikuun qaroomina ta’uusaa ogeessotni siyaasaa irratti waliigalu. Itoophiyaafi Eertiraanis hariiroo seenaa ummattootni biyyoota lameenii waliin qaban deebisuuf mariif marii qofatti dhimma bahuu akka qaban xiinxala kennamerraa hubatameera. Kun milkoofnaan ammoo faayidaan hawaas-dinagdeefi siyaasa biyyoota lameenii kan cimu ta’uusaati, kan hubatamu.
Torban kana/This_Week 11826
Torban darbe/This_Month 91663
Guyyaa mara/All_Days 1603621